I-Whole APT-Quiet-Modern-FAST WIFI-Work/Family Ready - I-Airbnb
I-Whole APT-Quiet-Modern-FAST WIFI-Work/Family Ready
Iona, Idaho, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Brenda
I-wifi esheshayo engu-240 Mbps, kanye nendawo yokusebenzela ekamelweni.
Konke okudingayo kuleli gumbi lokulala elinesitayela elisanda kulungiswa kabusha, ifulethi elilodwa lokugeza, elisendaweni ethule yedolobha lase-Iona. Kuyindawo yangasese yangasese yakho kokubili ukuhamba kwebhizinisi nokomndeni. Ibekwe ngaphesheya komgwaqo ukusuka epaki yedolobha, ehlanganisa indlela yokuhamba, izinkundla zethenisi nezebasketball, kanye nenkundla yokudlala yezingane. Amamayela ayi-6 nje enyakatho-mpumalanga ye-Idaho Falls, futhi iseduze ne-Highways 20, 26 kanye ne-I-15. Lesi sikhala esiyingqayizivele sinephedi lokhiye wokuzihlola, ikhishi elikhulu nendawo eningi yokuphumula.
Indawo yethu eyingqayizivele ingamakhilomitha ayi-6 ukuya empumalanga ye-Idaho Falls (Amamayela angu-3 nje ukusuka e-Costco entsha) amamayela angu-5 enyakatho-mpumalanga ye-Amoni, amamayela angu-7 ukusuka e-Idaho National Lab (ihhovisi le-Idaho falls) amamayela angu-5 ukusuka e-CEI (College of Eastern Idaho ) Amakhilomitha angu-25 ukuya eningizimu ye-BYUI, 76 Miles ukusuka e-Grand Teton resort (kanye ne-snowboarding esezingeni lomhlaba kanye nokushushuluza), amakhilomitha angu-105 ukusuka e-Yellowstone National Park kanye namamayela angu-84 ukusuka e-Jackson Wyoming. Ungathola izindawo eziningi zokuhamba ngezinyawo, ibhayisikili, i-kayak kanye nezinhlanzi imizuzu nje ukusuka efulethini. Ezinye zezintandokazi zethu zihlanganisa, i-Swan Valley, i-Heise, i-Ashton, i-Ririe Reservoir ne-Island park.
Ulwazi olwengeziwe nge-Apartment ngokwalo;
I-Apartment/Suite yethu ixhunywe kwesinye sezakhiwo ezindala kakhulu e-Iona. I-Merc Building yasekuqaleni yakhiwa ngo-1897. Bekungesinye sezakhiwo zokuqala zentengiso e-Iona, futhi yindala kunezakhiwo eziningi ezise-Idaho Falls. Izifiki kule ndawo zazisuka emakhilomitha amaningi zaya eMerc zizothenga yonke into kusukela kwezimpahla zokugqoka kuya emakhandleleni, nezingubo zokulala kuye kukhukhamba. Iphiko elinamathiselwe, lapho ifulethi likhona, bekuyisitolo sokudayisa inyama, indawo yokudlela ye-pizza, indawo yokwenza izinwele futhi iminyaka eminingana bekuhlala inkampani esekela isoftware yezokwelapha. Ngo-2018 indodana yethu yayifuna indawo yokuhlala (emva kokuthola umsebenzi omusha) futhi saphakamisa ukuthi mhlawumbe ilungiswe kabusha indawo yehhovisi eyayingenamuntu ibe yifulethi. Indawo ababezohlala kuyo nomkakhe baze bathole indawo yokuhlala. Sasicabanga ukuthi kuzothatha izinyanga eziyisi-6 ukulungisa kabusha, kodwa kwathatha unyaka wonke. wasebenza endaweni.
Sisuse amathayela osilingi ohlobo lwehhovisi futhi sabuyisela usilingi phezulu ekuphakameni kwasekuqaleni kwamamitha ayi-12+. Esinye sezici zethu esizikhonzile kuleli fulethi amapulangwe azungeze lolo silingi omuhle. Kuthathe amasonto ambalwa ukususa i-ceramic tile phansi futhi ilinganise, kodwa i-Laminate wood floor entsha yinhle. Amakhabhinethi ekhishini/egumbini lokugezela akhiwe endaweni futhi sicabanga ukuthi i-walnut emnyama empeleni ibeka isikhala futhi yengeza isitayela esiningi efulethini. Isikhala sihlukile ngoba siyipharalelogramu. Uzoqaphela ekamelweni ukuthi udonga eduze kwefasitela alukona isikwele ekamelweni. Sinqume ukuthi singayilinganisi njengoba senza eGumbini Lokuphumula, kodwa sigcine elinye igumbi ekamelweni lokulala. Iningi lamabhilidi amadala anesimilo futhi elethu alihlukile. Ideski nesihlalo esisekameleni kwathengwa esitolo sendawo sakudala, kungubuciko bangempela kanye nesitayela sobuciko futhi sicabanga ukuthi umdwebi omusha ungeza nje kulokho ubuciko nobuciko bezandla.
Indodana yethu yahlala efulethini unyaka ngaphambi kokuthola indlu e-Idaho Falls. Ngaleso sikhathi sanquma ukuyifaka ohlwini ku-Airbnb. Wayejabule ngokuba nekhaya elisha, kodwa edabukisayo ukuphuma efulethini, wayebeke isikhathi esiningi namandla ekulungiseni kabusha. Siyithanda ngempela indlela okuhlangane ngayo konke, futhi sithemba ukuthi nawe uzokwenza kanjalo.
Zizwe ukhululekile ukuhlanganyela epaki njengesikhala esingemva kwefulethi. Sithemba ukuthi sizokwenza ukuthuthukiswa okuthile lapho ekugcineni, (umgodi womlilo, uthango, indawo yokuhlala egcekeni, njll) kodwa okwamanje jabulela utshani obukhulu nomthunzi wezihlahla ezinkulu ze-elm.
Noma ngabe ulapha ngebhizinisi noma ukuzijabulisa, sithemba ukuthi uzothola ithuba lokujabulela ubuhle base-Iona, Idaho Falls nangale kwalokho. Siyakuthanda lapha futhi sicabanga ukuthi nawe uzokwenza!
Sifake ibhuku lomhlahlandlela efulethini elinolwazi mayelana nokudla kwendawo nokuzijabulisa.
Indawo esihlala kuyo ihlukile. Yidolobha lakudala. Ngale komgwaqo kunesakhiwo saseStanger Memorial, bekuyisikole sokuqala nesonto kulendawo. Njengamanje ingaphansi kwe-Bonneville Art Association futhi ingaqashiswa ngamaphathi namadili.
Eduze kwefulethi kunesitolo sokulungisa izimoto. Ngaphesheya komgwaqo lapho uzothola ibhusha lendawo (inyama yenkomo nenyama yengulube ethengiswa lapho) kanye neposi. Ipaki yedolobha kanye nebhilidi leDolobha/umtapo wolwazi nazo azikude, ngezansi nje komgwaqo. Kukhona indlela yokuhamba epaki kanye nenkundla yethenisi kanye nenkundla yebasketball. Kunemishini yenkundla yokudlala yezingane ehlanganisa umjiko kanye nesilayidi. Kukhona nezindawo zokukhosela ezimbalwa epaki ezingagcinelwa idolobha uma ufuna ukusingatha iphathi ngesikhathi uhlala.